पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा आज ८६ जना कोरोना संक्रमित थपिए ; कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? – झुल्केघाम
पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा आज ८६ जना कोरोना संक्रमित थपिए ; कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
श्रावण ३१ १७:०२ ५९५
झापा ,साउन ३१ । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश १ मा आज ८६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
तीमध्ये मोरंगमा सबैभन्दा बढी ६४ जना छन् भने सुनसरीमा १९ जना रहेका छन् । यस्तै तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा १–१ जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मोरंगको विराटनगरमा १९ महिला र २१ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । रंगेलीमा ३ महिला र ६ पुरुष, धनपालथानमा ५ महिला, जहदामा १ महिला र २ पुरुष, सुन्दरहरैचामा २ पुरुष, बुढीगंगामा १ महिला र १ पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तै, मोरंगकै ग्रामथान, सुनबर्षीमा १–१ पुरुष र कानेपोखरीमा १ महिलाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
यसैगरी सुनसरीको धरानमा २ महिला (वीपी प्रतिष्ठानका नर्स) र ९ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने रामधुनीमा ५ पुरुष, बर्जुमा ३ पुरुष, तेह्रथुमको म्याङलुङ, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण र उदयपुरको त्रियुगामा १–१ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा आजसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या १ हजार ९ सय ७ पुगेको छ ।
प्रदेश १ मा आज १ हजार ९ सय ४८ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ३२ महिला र ५४ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कोभिड १९ निगरानी, तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन समिति संयोजक डा.सरोज विशालले बताए । प्रदेश १ मा आजसम्म ६४ हजार ५ सय ९९ जनाको पिसिआर परक्षिण भएको छ ।